Professional Rug Ma Kapetị nhicha Services
Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » GB » London » Professional Rug Ma Kapetị nhicha Services1
Mmalite ikpeazụ 2020-10-14
Gbanwee 1 month ago
Koodu nzipu ozi: SW15 4AJ
Anyị na-enye nkwa zuru oke maka nsonaazụ usoro nhicha anyị niile. Ọ bụrụ n'inwee okwu ọ bụla gbasara ọrụ anyị, anyị ga-arụ ọrụ ahụ ọzọ n'efu. Ndị na-ehicha anyị kapeeti na-arụ ọrụ na akụrụngwa nhicha ụgbọ mmiri kachasị elu. Anyị na-enye mmịpụta mmiri ọkụ (usoro kachasị atụ aro site n'aka ndị nrụpụta kachasị kapeeti) na ọgwụgwọ akọrọ. Ọrụ anyị niile na-abịa na nkwa afọ ojuju ndị ahịa 100% ma ọ bụ na-ehicha kapeeti ụlọ gị. Ndị otu ọkachamara anyị nwere na London ga-enye gị ọmarịcha ọrụ mmịpụta mmiri ọkụ wee mee ka ebe obibi ụlọ gị dị ọcha kpamkpam. Ndị ọkachamara ahụ na-amalite site na nyochaa ala ụlọ gị iji chọpụta ụdị akwa, ọnụnọ nke stains, na ogo nke ala. A na-ebute ntụpọ na akara akara na usoro nhicha dị elu tupu akwa mkpuchi gị ma ọ bụ nke a kpochara, dabere n'otú ụdọ ya siri sie ike. Ndị otu anyị na-eji mkpuchi nchekwa na ebe nchekwa n'okpuru arịa ụlọ iji hụ na ị ga-enweta nsacha nsacha. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara anyị na ọrụ anyị site na ịga na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ kpọọ akara nkwado ndị ahịa anyị 24/7 na 020 3404 5123.
Aha ya 14. Oct 2020
Họrọ udiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Rooms Townhouses Studios Cottages BungalowsLand lots Residential Land Agricultural LandGarages and parking places Parking garagesCommercial Real Estate Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Cleaning Contractors Design Services Pest Control Furniture CompaniesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents
Aha ya October 14, 2020
London bu isi obodo buru ibu na England na United Kingdom. Guzo n’akụkụ Osimiri Thames nke dị na ndịda-ọwụwa anyanwụ England, n’isi isi mmiri ya dị kilomita iri asatọ (80km) na-eduga n’Oké Osimiri North, London abụrụla nnukwu ebe obibi na narị afọ abụọ. Ndị Rome guzobere Londoninium. Obodo London, isi obodo London - mpaghara dị naanị 1,12 square (2.9 km2) na nke akpọrọ akpọrọ Square Mile - na -echekwa oke na-agbaso oke ọchịchị ya anya. Obodo Westminster bụkwa obodo London nke nọ na-ejide ọkwa obodo. Onye isi obodo London na London London na-achịkwa Greater London.London bụ otu n'ime obodo kachasị mkpa n'ụwa niile, akpọrọ ya obodo kachasị ike, ihe kachasị amasị, kacha nwee mmetụta, nleta, kacha elele, ihe ọhụrụ, akwagide, otutu ulo ahia, nke obodo a ma ama maka oru. London nwere mmetụta dị ukwuu na nka, azụmahịa, agụmakwụkwọ, ntụrụndụ, ejiji, ego, ahụike, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ọrụ ọkachamara, nyocha na mmepe, njem na njem. London nọ na 26th nke obodo ukwu 300 maka arụmọrụ akụ na ụba. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ego kachasị ukwuu ma nwee mpaghara nke ise ma ọ bụ nke isii nnukwu GDP. Ọ bụ obodo a kacha eleta ka elere anya ndị ọbịa si mba ụwa wee nwee usoro ọdụ ụgbọ elu obodo kachasi dị ka tụọ site na njem ndị njem. Ọ bụ ebe a na-ebute ụzọ maka itinye ego, na-anabata ndị na-ere ahịa mba ofesi na ndị nwere nnukwu ego karịa ndị ọzọ n'obodo. Universitieslọ akwụkwọ mahadum dị na London na-etolite nnukwu ngalaba agụmakwụkwọ dị elu na Europe, na London bụ ebe ụlọ ọrụ mahadum dị elu dị ka Imperial College London na sayensi, ụlọ akwụkwọ London nke Economics na sayensi mmekọrịta, na kọleji mahadum London. London. N’afọ 2012, Lọndọn ghọrọ obodo mbụ bidoro n’egwuregwu Egwuregwu Olympic atọ n’oge a .London nwere ndị mmadụ na ọdịbendị dịgasị iche iche, a na-asụkwa ihe karịrị narị asụsụ atọ na mpaghara ahụ. Onu ogugu ndi mmadu n’agbata ogha n’etiti 2018 (nke kwekọrọ na Greater London) bu 8,908,081, obodo ato kacha buru ibu na obodo obula na Europe ma buru ndi 13.4% ndi bi na UK. Mpaghara obodo London bụ obodo nke atọ kachasị na Europe, na-esote Moscow na Paris, ndị nwere mmadụ 9,787,426 na ọnụ ọgụgụ 2011. Ogige ngwongwo London kacha buo ibu na Europe nke nwere 14,040,163 bi na 2016. Tupu Brexit, London bụ obodo kacha ibu na EU. London nwere saịtị akụkọ ihe nketa anọ: ụlọ nke London; Ogige Kew; saịtị ahụ nwere Obí nke Westminster, Westminster Abbey, na St Margaret's Church; na mmezi akụkọ ihe mere eme na Greenwich ebe Royal Observatory, Greenwich na-akọwapụta Prime Meridian (ogologo 0 0) na Greenwich pụtara Oge. Ala ala ndi ozo gunyere Buckingham Palace, London Eye, Piccadilly Circus, St Paul Cathedral, Tower Bridge, Trafalgar Square na The Shard. London nwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie, ebe ana-ere akwụkwọ, ọba akwụkwọ na ihe omume egwuregwu. Ndị a gụnyere British Museum, National Gallery, Natural History Museum, Tate Modern, British Library na West End ụlọ ihe nkiri. London n'okpuruala bụ netwọala ụzọ ụgbọ oloko kachasị nke ụwa.
Nearlọ akwụkwọ dị nso SW15 4AJ